Muuri News Network » Daawo:Sawirada Dowlada Sweden oo Labo kamid ah Wasaarada Dowlada Somalia ugu deqday lacag dhan $4 Milyan doollar
Daawo:Sawirada Dowlada Sweden oo Labo kamid ah Wasaarada Dowlada Somalia ugu deqday lacag dhan $4 Milyan doollar
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa heshiis is-faham (Memorandum of Understanding –MOU) la gashay Dowladda Sweden, kaasi oo ka dhacay xarunta Wasaaradda Maaliyadda, iyadoo ay wada galeen mas’uuliyiinta Wasaaradaha Maaliyadda, Caafimaadka, Hawlaha Guud iyo Guryaynta iyo mas’uuliyiin ka socotay Dowladda Sweden iyo Hay’adda UN-ka ee UNPOS oo iyadu fulin doonto Mashruuca dhismaha.
Dowladda Sweden oo ka mid ah wadamada caawiya Soomaaliya ayaa Mashruuca dhismaha labada Wasaaradood ugu deeqday lacag dhan $4 Million oo Doolar.
Heshiiskan ayaa dhigaya dib-u-dhiska xarumihii Wasaaradaha Maaliyadda iyo Caafimaadka oo sanadooyin badan burbursanaa. Labada Wasaaradood ayaa in muddo ah dhib ka heystay xafiisyo la’aanta, iyagoo shaqaalahooda aysan heysanin goobo shaqo oo ay ku fuliyaan hawlihii loo idmaday.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Maxamed Aadan Ibraahim (Farkeeti) ayaa sheegay in maalgelinta dhismooyinka ay wax-weyn ka taridoonto habsami u socodka shaqada Wasaaradaha, wuxuuna mahad celin gaar ah u jeediyay Dowladda Sweden dadaalka ay ku bixinayso xaqiijiinta dib-u-dhiska xaruumaha dowliga ah.
Sidoo kale Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Drs Xaawo Xasan Maxamed ayaa iyana dhankeedka u mahad celisay Dowladda Sweden waxay tilmaantay in mashruucan uu yahay mid la taaban karo oo wax weyn ka bedeli doono waxqabadka Wasaaradaha.
Geba gebadii Safiir-ku-xigeenka Safaaradda Sweden ee Soomaaliya Urban Sjostrom ayaa sheegay in dowladiisu ay mar walba garab taagan tahay Soomaaliya, mashruucan uu yahay mid sii xoojinaya xiriirka labada dal.